शोक कार्य - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
लेख > परमेश्वरसँगको अनुभव > दु: ख कार्य
बिहानको हावामा हल्का हावा चलेको छ किनभने सैन्य सम्मान गार्डले नीलो र चाँदीको कफिनबाट ताराहरू र पट्टिहरू राखेर झण्डा हटायो र झण्डा विधवालाई हस्तान्तरण गरे। आफ्ना बच्चाहरु र नातिनातिनाहरु द्वारा घेरिएको, उनले शान्तपूर्वक झण्डा र आफ्नो देशको लागि उनको पतिको सेवा को लागी कदर शब्दहरु स्वीकार गरे।
मेरो लागि यो केही हप्ताहरूमा दोस्रो अन्त्येष्टि थियो। मेरा दुई साथीहरू, एक जना विधवा र अहिले विधवा भएकीले आफ्नो जीवनसाथी समयपूर्व गुमाए। दुबै मृतक मध्ये कुनै पनि बाइबलीय "सत्तरी" वर्षसम्म पुगेका थिएनन्।
मृत्यु जीवनको वास्तविकता हो - हामी सबैको लागि। हामी यो वास्तविकता देखेर छक्क पर्दछौं जब हामी जान्दछौं र प्रेम गर्ने कोही मर्दछ। किन यस्तो देखिन्छ कि हामी कहिल्यै आफ्नो साथी गुमाउन वा मृत्युको प्रियजन गुमाउन पूर्ण रूपमा तयार हुँदैनौं? हामीलाई थाहा छ मृत्यु अपरिहार्य छ, तर हामी मर्छौं कि हामी कहिल्यै मर्नेछैनौं।
अचानक हाम्रो नोक्सान र हाम्रो आफ्नै जोखिमको सामना गर्नुपर्दा, हामी अझै अगाडि बढ्नु पर्दछ। धेरै छोटो समयमा हामी आशा गर्दछौं कि हामी जहिले जस्तो व्यवहार गर्छौं - समान व्यक्ति बन्नेछौं - जबकि सबैलाई थाहा छ कि हामी कहिल्यै एक हुनेछैनौं।
हामीलाई चाहिने कुरा भनेको समय, दु: खबाट पार हुने समय - चोट, क्रोध, अपराधको माध्यमबाट हो। हामीलाई निको पार्न समय चाहिन्छ। परम्परागत वर्ष केहि को लागी पर्याप्त समय हुन सक्छ र अरुको लागी हुन सक्दैन। अध्ययनहरूले देखाउँदछ कि सर्ने, अर्को काम खोज्ने, वा पुनःविवाह गर्ने बारेमा ठूला निर्णयहरू यस समयमा लिनु हुँदैन। युवा विधवाले आफ्नो जीवनमा दुर्गम निर्णयहरू लिनु अघि उनीहरू मानसिक, शारीरिक र भावनात्मक तवरमा सन्तुलित नभएसम्म कुर्नु पर्छ।
शोक भारी, उत्तेजक र कमजोर बनाउने हुन सक्छ। तर जे भए पनि भय terrible्कर छ, शोक सन्तप्तले यस चरणबाट पार गर्नुपर्नेछ। जो आफ्नो भावनाहरुलाई रोक्न वा वेवास्ता गर्न को लागी प्रयास गर्छन् उनीहरुका अनुभवहरु मात्र लामो हुन्छन्। दु: ख प्रक्रिया को एक पक्ष हो जुन हामीले पार गर्न आवश्यक छ - अर्को साइडमा जानको लागि - हाम्रो पीडादायी घाटाबाट पूर्ण रूपले पुनः प्राप्त गर्न। यस समयमा हामीले के आशा गर्नुपर्दछ?
सम्बन्ध परिवर्तन हुन्छ
जीवनसाथीको मृत्युले विवाहित जोडीलाई अविवाहित बनाउँछ। विधवा वा विधवाले ठूलो सामाजिक समायोजन गर्नु पर्छ। तपाईंको विवाहित साथीहरू अझै पनि तिनीहरूका साथीहरू हुनेछन्, तर सम्बन्ध समान हुनेछैन। विधवा र विधवाहरूले कम्तिमा एक वा दुई अन्य व्यक्तिको साथीहरूको सर्कलमा थप्नुपर्दछ जो समान स्थितिमा छन्। केवल उही व्यक्तिले सहि दुःख भोगेको कुरा बुझ्न र साझा गर्न सक्दछ।
अधिकांश विधवा र विधुवाहरूको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता मानव सम्पर्क हो। कसैलाई कुरा गर्ने जो जान्दछ र बुझ्दछ कि तपाईंले के बाट जाँदै हुनुहुन्छ अत्यन्तै प्रोत्साहनजनक हुन सक्छ। र जब अवसर आउँछ, तिनीहरूले समान सान्त्वना र प्रोत्साहन अन्य मानिसहरूलाई सहयोग दिन सक्छ।
जबकि यो केहि को लागी सजिलो नहुन सक्छ, समय आउँछ जब हामी मनोवैज्ञानिक रूपमा हाम्रो पुरानो पार्टनर छोड्नु पर्छ। ढिलो होस् वा चाँडो हामीले अबदेखि "विवाहित महसुस" गर्नु हुँदैन। विवाहको भाकल "मृत्युसम्म हामी भाग नगरेसम्म" रहन्छ। यदि हामीले आफ्नो जीवन लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न पुनर्विवाह गर्न आवश्यक छ भने, त्यसो गर्न हामी स्वतन्त्र महसुस गर्नुपर्छ।
हाम्रो जीवन र हाम्रो काम मा हुनु पर्छ। हामी यस पृथ्वीमा राख्यौं र जीवन को एक मात्र अवधि हामी अनन्तसम्म आवश्यक हुनेछ चरित्र गठन गर्न। हो, हामीले शोक गर्नुपर्दछ र हामीले शोक गर्ने यो कामलाई छिटो तुल्याउनु हुँदैन, तर हामीसँग यस ग्रहमा केही वर्षहरू मात्र छन्। हामीले अन्तमा यस कष्टबाट पर जानुपर्दछ - हामीले काम गर्न, सेवा गर्न, र जीवनको पूर्णताका साथ शुरू गर्नुपर्दछ।
एकाकीपन र दोषीलाई जवाफ दिन
तपाईंले आफ्नो मृत पति / पत्नीसँग लामो समयसम्म एक्लोपना महसुस गर्नुहुनेछ। प्रत्येक सानो वस्तु जसले तपाईंलाई उसको सम्झाउछ वा तपाईंको आँखामा आँसु थाम्दछ। ती आँसुहरू आउँदा तपाईं नियन्त्रणमा हुनुहुन्न। यो आशा गरिएको छ। आफ्नो भावना व्यक्त गर्न को लागी लाज वा अप्ठ्यारो महसुस नगर्नुहोस्। जो आफ्नो परिस्थिति जान्दछन् बुझ्न र तपाइँको जीवनसाथी र हानि को भावना को लागी तपाइँको गहिरो प्रेम को कदर गर्दछ।
यी एक्लो घण्टाको बखत, तपाईं एक्लो महसुस गर्नुहुन्न तर अपराधी पनि महसुस गर्नुहुन्छ। पछाडि फर्केर हेर्नु स्वभाविक हो: आफैलाई भन्नु: "को हुन्थ्यो होला?" वा "मैले किन गरेन?" वा "मैले किन गरे?" यो हामी रमाईलो हुनेछ यदि हामी सबै सिद्ध थिए, तर हामी छैनौं। हामी सबैलाई आफ्नो प्रियजनहरू मध्ये एकको मृत्यु हुँदा दोषी महसुस गर्न केही कुरा भेट्टाउन सक्दछौं।
यस अनुभवबाट जान्नुहोस्, तर यसलाई समात्नुहोस्। यदि तपाईंले आफ्नो पार्टनरलाई पर्याप्त प्रेम वा कदर देखाइएको छैन भने, अब एक निर्णय गर्नुहोस् एक अधिक मायालु व्यक्ति बन्ने जो अरूलाई बढी मूल्यवान् पार्दछ। हामी विगतलाई पुन: सुरक्षित गर्न सक्दैनौं, तर हामी पक्कै पनि हाम्रो भविष्यको बारेमा केही परिवर्तन गर्न सक्छौं।
विधवाहरू, विशेष गरी वृद्ध विधवाहरू, एकाकीपन र शोकको पीडाबाट लामो समयसम्म पीडित हुन्छन्। कम आर्थिक स्थितिको दबाब र विवाहित जोडी समाज जसमा हामी बस्दछौं, बुढ्यौलीको दबाबसँगै, उनीहरूको लागि प्राय जसो अपांगहरू हुन्छन्। तर यदि तपाईं ती विधवाहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ भने, तपाईंले स्वीकार्नुपर्दछ कि अब तपाईंको आफ्नो जीवनमा नयाँ भूमिका छ। तपाईसँग धेरै कुरा बाँड्ने कुरा छ अरूसँग बाँड्न, तपाई जुनसुकै उमेरको भए पनि।
यदि पति र परिवारप्रति जिम्मेवारीले तपाईंलाई तपाईंको केही प्रतिभा विकास गर्नबाट रोकेको छ भने, अब तिनीहरूलाई सुधार गर्नको लागि उपयुक्त समय हो। यदि थप प्रशिक्षण आवश्यक छ भने, स्कूलहरू वा सेमिनारहरू प्राय: उपलब्ध हुन्छन्। तपाईलाई देख्न छक्क पर्न सक्छ कि खैरो कपाल भएका कति मानिसहरू यस वर्गहरूमा छन्। तपाईंले सम्भवत पाउनुहुनेछ कि उनीहरूलाई आफ्ना कनिष्ठ सहकर्मीहरूसँग बराबर हुन समस्या भयो। अध्ययन गर्न गम्भीर भक्तिले के गर्न सक्दछ यो आश्चर्यजनक छ।
यो समय हो तपाईंले केही लक्ष्यहरू सेट गर्नुभयो। यदि औपचारिक शिक्षा तपाईको लागि छैन भने, आफ्नो कौशल र क्षमताहरूको विश्लेषण गर्नुहोस्। तपाइँ वास्तवमै के गर्न चाहानुहुन्छ? पुस्तकालयमा जानुहोस् र केहि पुस्तकहरू पढ्नुहोस् र क्षेत्रको विशेषज्ञ बन्नुहोस्। यदि तपाइँ मानिसहरूलाई आमन्त्रित गर्न रमाईलो गर्नुहुन्छ भने, त्यसो गर्नुहोस्। एक महान होस्ट वा होस्टेस हुन सिक्नुहोस्। यदि तपाईं खाना खाजा वा बेलुकाको खाद्यान्नहरू जुटाउन सक्नुहुन्न भने, सबैजनालाई एउटा भाँडा लिएर आउनुहोस्। तपाईंको जीवनमा बढी समावेश गर्नुहोस्। एक रमाईलो व्यक्ति बन्नुहोस् र तपाईं अरू व्यक्ति तपाईं आकर्षित आकर्षित पाउनुहुनेछ।
आफ्नो स्वास्थ्यको राम्रो ख्याल राख्नुहोस्
जीवनको एक धेरै महत्त्वपूर्ण पक्ष जुन धेरै मानिसहरूले बेवास्ता गर्छन् राम्रो स्वास्थ्य हो। कसैलाई गुमाउनु परेको पीडा शारीरिक र मानसिक रुपमा उडाउन सकिन्छ। यो विशेष गरी मानिसहरुको बारेमा सत्य हुन सक्छ। तपाईंको स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गर्ने समय अहिले होइन। एक चिकित्सा परीक्षा को लागी एक नियुक्ति तालिका। तपाईंको आहार, वजन, र कोलेस्ट्रोल स्तरको ख्याल राख्नुहोस्। के तपाईंलाई थाहा छ डिप्रेसन नियन्त्रण गर्न सकिन्छ तपाईको दैनिक तालिकामा बढी व्यायाम थपेर।
तपाईंको क्षमता अनुसार, राम्रो आरामदायक जुत्ता पाउनुहोस् र हिंड्न शुरू गर्नुहोस्। पैदल यात्राको लागि योजना बनाउनुहोस्। केहीको लागि, बिहान सबेरै उत्तम हुन्। अरूले दिनको पछि यसलाई रुचाउँदछन्। पैदल यात्राको लागि जानु पनि साथीहरूसँग समावेश गर्नु राम्रो गतिविधि हो। यदि पैदल यात्रा तपाईंको लागि असम्भव छ भने, व्यायाम गर्न केहि अन्य स्मार्ट तरिका फेला पार्नुहोस्। तर जे भए पनि तपाइँ के गर्नुहुन्छ, सार्न सुरू गर्नुहोस्।
मदिरालाई क्रुचको रूपमा बेवास्ता गर्नुहोस्
रक्सी र अन्य लागूपदार्थको प्रयोगको बारेमा एकदम सावधान रहनुहोस्। धेरैले शरीरलाई अत्यधिक रक्सी वा दुर्व्यसनको दुर्व्यसन प्रयोगको दुरुपयोग गरेर तिनीहरूको रोगहरू मेटाउने प्रयास गरेका छन्। रक्सी डिप्रेसनको लागि ईलाज छैन। यो एक शामक छ। र अन्य ड्रग्स जस्तै यो पनि लत हो। केही विधवा र विधवाहरू मद्यव्यसनी भए।
त्यस्ता क्रुचहरूबाट जोगिन बुद्धिमानी सल्लाह हो। यसको मतलब यो होइन कि तपाईंले एक सामाजिक अवसरमा पिउन अस्वीकार गर्नु पर्छ, तर सधैं धेरै मध्यम। कहिले एक्लो पिएन रक्सी पिउँदा, गिलासमा गिलास, वा रातमा सुत्न अन्य रक्सी पिउँदा पनि कुनै फाइदा हुँदैन। रक्सीले निद्रा बानीमा बाधा पुर्‍याउँछ र तपाईंलाई थकित बनाउन सक्छ। एक गिलास तातो दुध धेरै राम्रो काम गर्दछ।
आफूलाई अलग नबनाउनुहोस्
परिवारको साथ सम्पर्कमा रहनुहोस्। यो ज्यान लिने, कल गर्ने वा अन्यथा परिवारसँग सम्पर्क राख्ने महिला हो। एक विधवाले यी कर्तव्यहरू बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति हुन सक्छ र यसैले अत्यन्त एक्लो महसुस गर्न सकिन्छ। समय बित्दै जाँदा, तपाईं आफ्नो परिवारको नजीक जान सक्नुहुन्छ। हाम्रो मोबाइल समाजमा, परिवारहरू प्रायः तितरबितर हुन्छन्। विधवा वा विधवाहरू प्राय सयौं वा हजारौं किलोमिटर टाढा तिनीहरूको नजिकका आफन्तहरूबाट फेला पर्दछन्।
तर फेरि, हतार नगर्नुहोस्। तपाईंको लामो-लामो घर, परिचित छिमेकीहरूले घेरिएको, तपाईंको आश्रय हुन सक्छ। परिवारको पुनर्मिलनको योजना बनाउनुहोस्, तपाईंको पारिवारिक रूख जाँच गर्नुहोस्, पारिवारिक इतिहास पुस्तक शुरू गर्नुहोस्। सम्पत्ति हुनुहोस्, दायित्व होइन। जीवनको सबै परिस्थितिहरूमा जस्तै तपाईले अवसरहरूको लागि कुर्नु हुँदैन। यसको सट्टामा, तपाईं बाहिर जानुहोस् र तिनीहरूलाई फेला पार्नुहोस्।
सेवाको अवसरहरूको खोजी गर्नुहोस्। सबै उमेर समूहहरूसँग सम्बन्धित। युवा एकल उमेरका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ। बच्चाहरूलाई ध्यान दिन समय भएको व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क आवश्यक पर्दछ। जवान आमाहरूलाई मद्दत चाहिन्छ। बिरामीलाई प्रोत्साहन चाहिन्छ। जहाँ मद्दत आवश्यक छ र जहाँ तपाईं यो गर्न सक्षम हुनुहुन्छ जहाँ तपाईंको सहयोग प्रस्ताव गर्नुहोस्। केवल वरिपरि बस र प्रतीक्षा नगर्नुहोस्, आशा छ कि कसैले तपाईंलाई जान को लागी केहि गर्न भनेर सोध्य छ।
सबैभन्दा चिन्तित, अपार्टमेन्ट ब्लक वा जटिलमा उत्तम छिमेकी बन्नुहोस्। केहि दिन यो अरू भन्दा अधिक प्रयास लिन्छ, तर यो लायक हुनेछ।
आफ्ना बच्चाहरूलाई बेवास्ता नगर्नुहोस्
बच्चाहरूले मृत्युसँग व्यवहार गर्दछन् उनीहरूको उमेर र व्यक्तित्वमा निर्भर। यदि तपाईं बच्चाहरू घरमा हुनुहुन्छ भने, यो सम्झनुहोस् कि तपाईं आफ्नो जीवनसाथीको मृत्युले तपाईं जस्तो हुनुहुन्छ त्यसरी नै आघात महसुस गर्नुभयो। जोलाई कम से कम ध्यान चाहिएको जस्तो लाग्न सक्छ ती हुन सक्छन् जसलाई तपाईलाई सबैभन्दा धेरै मद्दत चाहिन्छ। आफ्ना शोकमा बच्चाहरूलाई लक गर्नुहोस्। यदि तिनीहरू सँगै अभिव्यक्त गर्छन्, यसले तिनीहरूलाई परिवारको रूपमा नजीक मिल्नेछ।
सकेसम्म चाँडो आफ्नो घर ट्र्याकमा लाउन कोसिस गर्नुहोस्। तपाईंको बच्चाहरूलाई स्थिरता चाहिन्छ जुन तपाईं मात्र दिन सक्नुहुन्छ र तपाईंलाई पनि यो आवश्यक छ। यदि तपाईंलाई प्रत्येक घण्टा र हरेक दिन के गर्नु पर्ने कार्यहरूको सूची आवश्यक छ भने, यसको लागि जानुहोस्।
मृत्युको बारेमा प्रश्नहरू
यस लेखमा दिइएका बुँदाहरू भौतिक चीजहरू हुन् जुन तपाईलाई गर्न सक्छन् तपाईको जीवनको यो सबैभन्दा कठिन समयमा तपाईलाई मद्दत गर्न। तर आफ्नो प्रियजनको मृत्युले तपाईंलाई जीवनको अर्थमा गम्भीर प्रश्न गर्न सक्छ। यस लेखको सुरूमा मैले साथीहरूलाई नाम दिएँ तपाईको जीवनसाथी गुमाएको महसुस गर्छन्, तर तिनीहरू हताश र निराश छैनन्। तपाईं बुझ्नुहुन्छ कि यहाँ जीवन र अहिले अस्थायी छ, र यो कि क्षणिक शारीरिक जीवनको कठिनाइ र परीक्षाहरू भन्दा तपाईं र तपाईंको प्रियजनहरूको लागि ईश्वरको धेरै भण्डार छ। यद्यपि मृत्यु जीवनको स्वाभाविक अन्त्य हो, तर परमेश्वर आफ्ना मानिसहरुका हरेक व्यक्तिको जीवन र मृत्युको बारेमा गहिरो चिन्ता गर्नुहुन्छ। शारीरिक मृत्युको अन्त छैन। हाम्रो सृष्टिकर्ता, जसले जमीनमा खस्ने हरेक भँगेरा जान्नुहुन्छ, पक्कै पनि यसको कुनै पनि मानव जीवको मृत्युलाई वेवास्ता गर्नुहुने छैन। भगवान यस बारे मा सजग छ र तपाईं र तपाईंको प्रियजनको ख्याल राख्नुहुन्छ।